Indlela yokwenza melkozaglublenny strip isisekelo? Kuthiwa isisekelo esihle ngoba akusho ukufinyelela of okokuqandisa ukujula. Lezi izisekelo athandwa isikhathi eside e-Canada, e-United States, Norway, Denmark kanye Finland. Thina waqala okumele asetshenziswe kamuva.
Melkozaglublenny eshibhile ezivamile itheyiphu base izikhathi 2. Manje ngezizathu ezifana nokwakha izakhiwo ezintathu emabhilidini, izibhedlela, izikole kanye izinkulisa. Kulokhu isisekelo lungekho ukugcizelela lapho ugonyuluka inhlabathi. Okubalulekile wukuthi usebenzise i ukuthi inhlabathi ayigongobali eceleni kwakhe. Standard melkozaglublenny strip isisekelo ASTM 32-01 yasungulwa ngo 2001.
Melkozaglublenny strip isisekelo ingena emhlabathini 40-50cm kuphela, kodwa emseleni is bemba izikhathi ezimbili ebanzi kuka isisekelo ejwayelekile. Izinto zokuvala umoya ibekwe lapha kuphela extruded polystyrene foam noma amaminerali uvolo ngesisekelo basalt. Unamathela ulwelwesi ibitume yonkana kobuso isisekelo, phansi uzimisele at 90˚. Lapho ukulahlekelwa ukushisa ngokusebenzisa phansi igcinwe ngaphansi ungqimba ukwahlukanisa, okuyinto kuvimbela okokuqandisa kwenhlabathi musa zigcwala. Le nqubo ibizwa ukusetshenziselwa ukufudumeza izakhiwo, ukuze isetshenziswe ekhaya, kwizakhamuzi kanye namabhizinisi, ezenkolo, ezamasiko nezinye izikhungo.
Nge ukwakhiwa kwamabhilidi ezibandayo, esisekelweni heater akuyona esinqunyiwe, kodwa wabeka isisekelo emhlabeni azungezwe. Ukushisa okuvela ngaphansi komhlaba akusho kuyiqhwa phansi nokuvuvukala futhi kwenzeka. Columnar strip isisekelo base itheyiphu inyuka lemahlanganweni, eyenza bona ngibhabhadise it in ukujula encane. Okokuqala, lezi zingongolo ke bagcwalisa eteyipini, usebenzisa ama-valve, ahlanganiswe wire. Ngakho, umklamo olulodwa, elihlanganisa zonke izinzuzo itheyiphu nezinsika, futhi aqede nemibi. Ukuze kwandiswe eziveza endaweni futhi izinsika ayikwazanga ukukhuphuka, awabonisi kusuka phansi.
Columnar base itheyiphu ivumela ukunciphisa traction ka ohlangothini ezindongeni sisekelo ukujula eqhweni, futhi awo acekela eside kakhulu futhi ingafinyelela amathani 6 ngamunye imitha square. Zonke ukuxhumana ngokusebenzisa izakhiwo ezinjalo wafingqa lula njengakuqala thusi, futhi ngemva kwaso. Kwembulunga tape base ilungu njalo kahle kubonakala ukusebenza kwalo okwalandela. Ngo zindlu zisebenzisa heater amandla kakhulu. Izindlu akudingeki Ukushisa njalo, uma ayisetshenziswa, bona buthule jeza phi lokushisa.
Strip isisekelo hhayi ukukhipha abazalwane bakwazi isihlabathi izikhwama kuphela, it kwehlisa amandla ukuvuvukala. Lo msuka ubukeka isisekelo sendlu njengoba iposi noma inqwaba, wabeka ezinsikeni zawo. Kwakuvamise kuphela izindlu omunye storey wenza lwemishayo, round izingodo noma prefabricated iphaneli izindlu. Ngaphansi izisekelo zingangcwatshiwe njalo ewusizo ukwenza amanzi emithonjeni, ezimbili - ezintathu ohlangothini ngalunye. Lokhu uhlobo isisekelo wasebenzisa ezindaweni ezinezinga komhlaba okusezingeni eliphezulu uma zonke ezinye izinto uhlele kahle.
Tape hhayi isisekelo ezishaywayo kungase kuhilele amabhlogo ngabanye lemahlanganweni futhi kwe-Midpoints ungene ezinhlangothini zalo eside. Beka amabhlogo nangaphansi odongeni kwangaphakathi ngaleso amaphuzu mayelana nesigameko zangaphandle izakhiwo umthwalo ezinembewu. Ibanga phakathi kwazo kuncike isisindo isiyonke isakhiwo, ngokwesilinganiso, 2 amamitha. Ukufakwa block noma dwala ngaphansi kwaso Kunconywa ukuba abeke ukwahlukanisa ngaphandle kokuquleka ngamanzi azigcina impahla yayo, i extruded polystyrene Foam. Sand ngoba imicamelo kufanele kube indawo-grained noma medium-grained, kungenzeka ukusebenzisa slag kubhayela.
Ahlanganisiwe ukulinganisela ekubalweni ukwakhiwa izindleko
Ngesonto lokuqala yokukhulelwa: izibonakaliso emizweni ubuhlungu, ngokwahlukana izinguquko emzimbeni